Uyaziqhenya u-Moreeng njengoba ama-Momentum Proteas aba iqembu lesibili emhlabeni
South African women celebrate victory during the 2021 Women's ODI Series against India
eLucknow: Umqeqeshi wama-Momentum Proteas u-Hilton Moreeng uthi ‘umzuzu wokuziqhenya kumdlalo wesifazane e-South Africa’ emuva kokuthi iqembu lesizwe likhuphuke kwi-ranking yabo ephezulu okokuqala kuma-One-Day International kulelisonto njengoba babe iqembu lesibili emhlabeni.
Lokhu kwenzeke emuva kokuthi baphethe i-series encomekayo ngo-4-1 behlula i-India kubo e-Lucknow.
Ama-South Africans ajombe ompetha bomhlaba i-England kanye ne-India ukuze babe iqembu lesibili emuva kwe-Australia.
Okokuqala bezithola phezulu kangaka selokhu kwaba nohlelo lwe-ranking kwabesifazane ngo-Oktoba 2015 futhi u-Moreeng ukholwa ukuthi kungumzuzo oyingqophamlando kumdlalo wabesifazane kwisizwe.
“Siyakujabulela ukuhlula elilodwa lamaqembu ahamba phambili emhlabeni kwisimo sabo,” esho ejabula umqeqeshi. “Akulula ukuza kwi-sub-continent, ikakhulukazi emuva kokufika lapha okokugcina futhi sahlulwa.”
“Kodwa sahlala phansi njengeqembu futhi sabheka okwenzeka ngo-2019. Bese kwaba nokuzihlola okuningi futhi uyabona indlela esafika ngayo lapha kulesikhathi sakhuphula izinga lethu lokudlala.”
“Kade emangalisa amantombazane futhi umklomelo walokho usetafuleni lama-ICC rankings. Siyiqembu lesibili kuma-rankings omhlaba futhi umzuzo wokuziqhenya kakhulu kumdlalo wabesifazane e-South Africa kanye nabesifazane bebonke.”
Umphathi we-Momentum Metropolitan Sponsorships and Events u-Carel Bosman unezezele wathi: “Halala kuma-Momentum Proteas. Sonke simayelana nohambo futhi noma umdlali noma iqembu, sikhona kuhambo lakho oluya empumelelweni.”
“Ukuba ingxenya lohambo esaliqala nabo eminyakeni eyisishagalombili edlule, ukubabuka bethola izinkontileka kanye nokuba ochwepheshe kanye nokuba ingxenye lohambo labo lapho bekhona manje, kukhombisa ukuthi izinhlanganiso ezinkulu zingenzani.”
“Siyayijabulela indlela u-Hilton neqembu lakhe abaqhubeke ngayo futhi sikholwa ukuthi kuningi okuzayo ekwakheleni kwi-ICC Women’s World Cup onyakeni ozayo.”
u-De Klerk, u-Du Preez no-Bosch banqoba i-series ngo-4-1 i-CSA imemezela amaqembu ama-Proteas anezinkontileka ku-2021/2022 i-CSA ihalalisela ama-Momentum Proteas ngokunqoba i-ODI series e-India u-Goodall uhlanganise umjaho oyirekhodi njengoba i-SA ithuse i-India ukuqoba i-series u-Lee okhaliphile usize ama-Momentum Proteas abe ngaphambili ngo-2-1 Ama-Proteas ka-Moreeng afunde kokuhlangenwe nakho okwedlule Uhambo lapho kungaziwa khona: u-Sune Luus Ama-Momentum Proteas amemezela iqembu kanye nohlelo lohambo lase-India u-Moreeng ubheke okukhulu kwi-World Cup emuva kwempumelelo nge-Pakistan i-CSA iyaziqhenya ngo-Ismail othole umklomelo we-ICC i-CSA ihalalisela ama-Momentum Proteas ngokunqoba i-T20 series